Egburu mmadụ abụọ na Hyatt Ziva Riviera Cancun ogbunigwe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Egburu mmadụ abụọ na Hyatt Ziva Riviera Cancun ogbunigwe
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Crime • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • ndị mmadụ • Resorts • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Egburu mmadụ abụọ na Hyatt Ziva Riviera Cancun ogbunigwe.
Ndị odeakwụkwọ steeti na-ahụ maka nchekwa ọha na steeti Quintana Roo dị na Mexico kwuru na egburu mmadụ abụọ “e chere na ha bụ ndị na-ere ọgwụ ike” mana gbakwụnye na ọ nweghị ndị njem nlegharị anya merụrụ nnukwu ahụ ma ọ bụ tọọrọ.
A kọrọ agbapụ a n'akụkụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ 5-star Cancun n'ehihie Tọzdee.
Ndị ọrụ Hyatt Ziva Riviera Cancun kpọbatara ndị ọbịa ebe ntụrụndụ na-ezo n'ime akụkọ gbasara agbapụ.
Akụkọ Mexico kwuru na a gwọọ otu onye njem nleta maka “obere mmerụ ahụ” a na-akọwaghị nke ọma n'ihi ihe ahụ merenụ.
A kọrọ agbapụ a na nso nke kpakpando ise Hyatt Ziva Riviera Cancun banye Mexico n'ehihie Tọzdee.
Dị ka akụkọ ndị na-emegiderịta onwe ha si kwuo, onye ji égbè ma ọ bụ ndị oji egbe bịarutere n'ebe a na-eme njem, bụ́ ebe ndị America na-eme njem na-ewu ewu, site n'akụkụ osimiri dị n'akụkụ wee malite ịgba égbè.
Ndị ọrụ kpọbatara ndị ọbịa na ndị ọrụ n'ime oge mgbapụ.
Ndị ọbịa ahụ tụrụ ụjọ kọwara otu onye ji egbe na-abịarute ebe ezumike ahụ zoro ezo site n'akụkụ osimiri wee mepee ọkụ n'etiti egwuregwu volleyball. Enwekwara akụkọ na onye na-agba ụta ma ọ bụ ndị na-agba ụta na-eji "igwe igwe" ka ha na-agbada na ebe ntụrụndụ.
Opekempe, mmadụ abụọ a na-enyo enyo na ha bụ ndị ohi ka egburu n'otu mgbọ ogbunigwe, The State Secretariat of Public Security na Mexicosteeti Quintana Roo kwuru.
Dị ka ndị ọrụ steeti si kwuo, e gburu mmadụ abụọ ndị e chere na ha bụ ndị na-ere ọgwụ ọjọọ ma ọ dịghị onye njem nleta merụrụ ahụ nke ukwuu ma ọ bụ tọọrọ.
Onye ọkaiwu steeti ahụ mechara kwupụta na ihe a mere bụ ogbunigwe ndị otu, na-ekwu na ọ mere n'akụkụ osimiri dị nso na ebe ntụrụndụ.
Dị ka akụkọ mgbasa ozi mpaghara si kwuo, a gwọchara otu onye njem nleta maka "obere mmerụ ahụ" a na-akọwaghị nke ọma n'ihi ihe ahụ merenụ.
N'ime otu awa nke agbapụ ahụ, e kwere ka ndị ọbịa laghachi na nnabata nke họtel ahụ.
Onye nkwuchite maka Hyatt Ziva Riviera na Cancun kwuru na ndị ọrụ ụlọ nkwari akụ "mere ndị ọchịchị obodo ozugbo" bụ ndị e kwuru na ha nọ ebe ahụ na-eme nchọpụta.
Ụlọ ọrụ Embassy US na Mexico kwuru na ọ na-eleba anya na akụkọ gbasara agbapụ a.
Ndị otu ndị a na-enyo enyo na-agbapụ agbapụ na ebe ọzọ a ma ama na Tulum, ihe dị ka kilomita 80 na ndịda Cancun, hapụrụ ndị njem njem si mba ọzọ abụọ nwụrụ na atọ ndị ọzọ merụrụ ahụ n'ọnwa gara aga, mgbe nke ahụ gasịrị, ezigara ndị ọrụ nchekwa Mexico ka ha kwado ndị ọchịchị obodo.
Ọ gbasoro ọtụtụ ihe gbasara ndị otu na mpaghara ahụ, gụnyere ogbugbu onye uwe ojii n'obodo Playa del Carmen dị nso na ngwụcha Ọktọba.